Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/0/c/0/haldoornews.com/httpd.www/index.php:1) in /customers/0/c/0/haldoornews.com/httpd.www/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 699 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/0/c/0/haldoornews.com/httpd.www/index.php:1) in /customers/0/c/0/haldoornews.com/httpd.www/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 707 Xanuun Cusub Oo Dunida Ka Dilaaacay | Haldoornews
Monkey Pox wuxuu ku fidaa laba waddan oo kale ka dib markii uu labanlaabay kiisas gudaha UK Monkey Pox ayaa ku badan qaar ka mid ah wadamada Bartamaha iyo Galbeedka Afrika laakiin cudurka dilaaga ah ee 2022 aad ayuu uga sii fog yahay Monkey Pox wuxuu ku fiday laba waddan oo kale iyadoo uu weli sii socdo faafitaanka caalamiga ah.
Jarmalka iyo Belgium labaduba waxay xaqiijiyeen inay ogaadeen kiisas cudurka furuqa u eg. Xanuunka ayaa ah mid dhif ah oo lagu arko meel ka baxsan Afrika laakiin waxaa laga xaqiijiyay UK, US, Canada, Spain, Italy iyo kuwa kale toddobaadyadii la soo dhaafay.
Hay’adda Ammaanka Caafimaadka UK waxay xaqiijisay in kiisaska UK ay in ka badan labanlaabmeen oo ay noqdeen 20. Labka LGBT+ waxa laga codsanayaa inay iska ilaaliyaan calaamadaha ka dib markii caabuq laga helay ragga galmoodka la sameeyay ragga kale.
Adeegga caafimaadka ee ciidamada qalabka sida ee Jarmalka ayaa xaqiijiyay inay heleen hal kiis oo ah ‘fayras shaki la’aan ah markii ugu horreysay Jarmalka 19-kii May bukaan leh nabarada maqaarka si gaar ah.
Maamulka caafimaadka ee Belgian ayaa sheegay in ay xaqiijiyeen laba xaaladood oo cudurka fayraska ah. Sida laga soo xigtay Flemish Cudurku wuxuu keenaa inay dillaacaan nabarro yaryar oo jidhka ah, iyo sidoo kale qandho.
Maamulka caafimaadka ee Isbaanishka ayaa xaqiijiyay 14 kiis oo dheeri ah horaantii maanta, taasoo tirada guud ka dhigeysa 21, oo ay ugu horeyso agagaarka Madrid. Waxaa jira 20 kiis oo kale oo looga shakisan yahay, 19 ayaa ku yaal bartamaha gobolka Madrid iyo mid ku yaal jasiiradaha Canary.
Talyaanigu wuxuu sidoo kale xaqiijiyey laba cudur oo kale, taasoo wadarta guud ee dalka ka dhigaysa saddex. Shaqaalaha caafimaadka ee UK ee uu la kulmay fayraska ayaa la siinayaa tallaalka furuqa. Wasiiradu waxay amreen 20,000 oo qiyaasood oo dheeri ah si loogu daro kaydka yar ee 5,000 ee ay hore u hayeen adeega caafimaadka. Kiiskii ugu horreeyay ee Boqortooyada Midowday ayaa la duubay 2018 laakiin, si ka duwan dhowr xaaladood oo lagu aqoonsaday cudurkan dillaacay, waxaa lala xiriiriyay socdaal uu ku tagay waddan Afrikaan ah.
Tirada kiisaska la xaqiijiyay gudaha UK ayaa la filayaa inay kor u kacdo wararkii ugu dambeeyay ee UK HSA Saynis yahanadu waxa ay xaqiijiyeen in cudurku uga gudbi karo bini’aadamka isaga oo xidhiidh dhow la leh qof qaba. Busbuska daayeerku waxa uu soo saaraa wax la mid ah cudurka furuqa laakiin waxa uu leeyahay heer dhimasho oo hoose, iyada oo dadka intooda badan ay si buuxda u bogsadaan.
Calaamadaha ugu horreeya waxaa ka mid ah qandho, madax-xanuun, murqo xanuun, dhabar xanuun, qanjidhada oo barara, qarqaryo iyo daal. Firiiric ayaa sidoo kale soo bixi kara, badanaa waxay ka bilaabmaan wajiga ka hor intaysan ku faafin qaybaha kale ee jirka. Aakhirka waxay samaysaa qolof ka soo dhacda.
Pox si sahal ah uguma fido mana aha hawadu sida Covid-19, taa badalkeeda waxay ku tiirsan tahay dadka u soo dhawaada qof ama xayawaan cudurka qaba.
Fiiro gaar ah : xanuunkan Astaamihiisa markaad Fiirisid wuxuu u eeg yahay Xanuunka ay Somalidu u taqaan Hablo-baas ama “chicken box”
Diyaariye: Abdirashiid Abdi